Sivy mahakivy indrindra fahadisoana rehetra Video Game Players ho - News Fitsipika
Sivy mahakivy indrindra fahadisoana rehetra Video Game Players ho
Avy mistimed jumps hamonjy lalao mishaps, eto dia ny lalao fahadisoana isika rehetra hanambara indray ary indray
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ny sivy mahakivy indrindra fahadisoana rehetra mpilalao manao lalao video” dia nosoratan'i Keith Stuart, fa theguardian.com ny zoma 1 Aprily 2016 08.04 UTC
Misy ny sasany manao hadisoana isika zatra. Tsy afaka manampy ny tenantsika. Dia tahaka isika dia manao izany, ny ampahany amin'ny atidoha no nikiakiaka: "Izany no zavatra tena tsy mety ny atao." Saingy toa, alohan'ny fantatsika izany, efa lasa aloha isika nanao izany; dia efa nividy tapakila ny mahita Batman and Superman.
Indraindray ireo zavatra mitranga eo amin'ny lalao koa. Tsy olana ahoana niaina anao any Call ny Duty, misy fotoana ny hevitrao ianao dia afaka haka mpilalao Narahi-maro indray ny mamaly azy ireo amin'ny poleta sy bala roa ao le clip. Na dia efa nisy Fasana Raider milalao lalao ho an'ny 10 taona ianao indraindray mbola mandeha niakatra ho any amin'ny hantsana goavana sy mieritreritra, Manontany tena aho raha afaka tafavoaka velona Lara efa ho lavo? Ary dia hahita fa izy tsy afaka. Ary ny toeram-pisavana farany dia maro kilaometatra indray.
Eto, avy eo, ny sasany mahazatra lalao fahadisoana avy hatramin'izay. Add anao manokana "favoris" ao amin'ny fanehoan-kevitra fizarana.
The misjudged Hanketo
Ny mahazatra Mario latsaka. Sary: Nintendo
Izany no archetypal platforming fahadisoana: fantatrao ianao tsy tokony namely nitsambikina mandra-iray ny Mario Pixel ny tongotra dia ny sisin'ny - saingy avy eo nandritra ny mihazakazaka ny, ny adrenaline kicks in, ny rantsan manomboka twitching sy eo anatrehanao na dia fantatrao izany, ianao maika ny bokotra … lavitra loatra ny tany am-boalohany, fandefasana ny moustached mahery fo iza na iza miditra amin'ny lavaka tsy hita noanoa. Fa ny faha-24 ny fotoana. Ianao misento be Manontany tena raha azo atao ny hanaikitra ny Super Nintendo maso amin'ny antsasaky amin'ny niteraka tanana.
The haingana zoro
Volkswagon fiara fahadisoana avy amin'ny lahatsary YouTube, Gran Turismo V nianjera
"Eny, izany Ho diovina ny hanatona ity kosa hairpin amin'ny 115mph dia namely ny notapahiny taloha kelin'ny ny fara tampon'ny, Inona no mety angamba mandeha … Andriamanitra ô, fiarako dia soraty-eny. "
Ny ady nahomby lalao combo
Ianao no manao toy ny Ryu tapa-bolana, ianao mahalala ny fototra rehetra moves, dia afaka manatanteraka azy ireo nefa tsy mijery ny maso. Ary ny vady avy eo ho Street Fighter ny fifaninanana, ary ianao vonona rehetra amin'ny fandravana combo fanafihana, mahakasika lafiny maro nifandimby boribory sy voaomana ny punches. Ny fotoana dia tonga. Ryu dia ho be voninahitra. Ryu ho mpandresy. Ryu dia … manao hafahafa miahotrahotra dihy kely izay mbola tsy hita eo anatrehan'i amin'ny ora maro ny mafy fiofanana. Ken kicks azy tao amin'ny tarehiny. Ken nandresy.
Ny traikefa nahafinaritra voambolana fahatapahan'ny lalao
Hobbit, kely novaina
"Ianao no tao amin'ny efitra amin'ny trano fisotroana am-ponja izay fotsiny tery loatra ny manenjika eo,", Hoy ny vaovao mahaliana tsary ny traikefa nahafinaritra fotsiny fa ianao nividy noho ny ZX Spectrum. "Ao amin'ny latabatra teo anoloan'ny aminareo aza dia tavoahangy misy soratra hoe 'fihenan'ny potion'. Inona izao?"Fa herinandro, ianareo miditra ny matoanteny amin'ny hafa-nom tsikombakomba: zava-pisotro potion, handevona potion, sip potion, quaff potion. Tamin'ny farany, voasarika noho ny sobs ny fahasorenana, ny sisa amin'ny fianakavianao vokany tafiditra. "Efa niezaka 'gulp',", Hoy ny grandad an-telefaonina avy any Hitchen indray alina. Tsy misy asa.
Telopolo taona tatỳ aoriana hitanao ny lalao amin'ny iray emulator. Ianao namatrana azy, soraty ao amin'ny "mitelina potion", ary ianao amin'ny alalan'ny efitra ho any amin'ny manaraka indray mipy. Ianao mibanjina ny efijery nandritra ny ora maro mangingina mamerina ny tenanao, "Tsy very maina ny mbola kely".
Ny velona horohoro tahotra fanafihana
Nalaina tao amin'ny YouTube lahatsary, Resident evil 2 Zombie Surprise Fanafihana
Tsara izany, izany tsara dia tsara rehetra. Manana bala dimy, manana ny antsy, ary raha misy ratra na inona na inona ianao, misy telo medipaks miverina any amin'ny antechamber. Tena tanteraka soa aman-tsara any amin'ny faritra mbola tsy fantatra io ary … tampoka Zombie! Oh mamy Jesosy, inona no tanjona bokotra? Inona ny tanjona bokotra?! Oh tsy, ianao lamba famàohana ampy fitaovana ny volom-borona fa tsy ny basy - Nahoana no dia manana fa ao amin'ny lisitra? Ny Zombie no edging akaiky. Raha afaka mitambatra fotsiny ny basy miaraka amin'ny … tara loatra.
Ny grenady sasany loza
Antso hanoa adidy tsy grenady
Ianao no milalao Call ny Honor: Modern Ady. "Hey Afaka maka avy manontolo roomful ny fahavalony grenady ity," mihevitra ianao. "Fotsiny aho mila voalohany izany sy ny … miandry inona no mitora-bokotra? oh yeah, dia izay. ok, mihinana ity! Oh tsy, ny grenady dia bounced avy eny ambony tsy hita maso rafitra teo aloha fotsiny ambony lohako, ary ankehitriny mandainga amin'ny fitoeran-tongotro. Ve aho manana fotoana mba haka azy io ka ario indray?" [Sound ny fipoahana mafy] "Tsy misy. Tsia."
Character fisafidianana nenina
A Concert avy Lorenzo Costa. lovely sary hosodoko, lousy toetra kilasy.
Sary: Lova Images / Getty Images
ianao 20 ora ho midadasika milalao traikefa nahafinaritra angano mitondra ny lohateny hoe Final Dragon XVII. Amin'ny voalohany, ny lalao aoka ianao misafidy avy amin'ny toetra amam-panahy maro samy hafa kilasy; afaka efa ho matanjaka sady mahery fo, Wise Sage, Eagle-maso Archer na Hatahorako Warlock. Nefa tsy. Mahatsapa impish ary mifanohitra, ianao nisafidy ny "Mpirenireny mpitendry lokanga aho". ankehitriny, miatrika goavana Level 40 ny helo afo fofonaina dragona izay vao rava ny ankamaroan'ny tanàna, ny fanapahan-kevitra mitady mainka nampihomehy. Ianao mitady mafy ny alalan 'ny fahefana manokana ho an'ny tena manimba safidy. Raha ny fandehany mba ho "feom ballad". Tsy ho levona mandrakizay ny.
Ny tara lalao afa-loza
Oregon Trail Sary: Oregon Trail
Afaka mahazo antoka fa lasa amin'ity fizarana ity ny lalao alohan'ny fahavaratra, Ho tonga toa tsy misy izany olana. Ny tiako hambara, rehetra tsy maintsy atao dia hamono ny orc tafika, dia niala foana ny poizina zana-tsipìka fandrika, dia hitondra eo amin'ny farany-ny-lenta lehibeny biby goavam-be.
Fa efatra ora taty aoriana, ny mpampiasa mamono anareo - miaraka fotsiny amin'ny silaka fahasalamana sisa amin'ny fotoany avy izy fiainana habetsahan'ny. "Restart amin'ny farany afa-?"Sneers ny lalao sakafo. Misy ampahany amin'ny atidoha mamela anao manonofinofy fa tena nanao nandona afa-, tsara rehefa avy mamono izany 300th orc mpiady.
Ary ny lalao restarts. Tamin'ny vao hanomboka ny ny haavon'ny. Ianao ho faty ny teeny somary anatiny.
Ny showboat amin'ny helo
Maka avy amin'ny lahatsary YouTube, Fifa 15 Chip Voatifitra tsy
Io no farany segondra vitsy ny Fifa 16 lalao eo Norwich sy Barcelona. Ny isa dia 1-1, fa ny mpikapoka no mamaly ny amin'ny sazy ny Barca efajoro tsy misy mpiaro teo akaiky teo, ary ny mazava tifitra amin'ny tanjona. Ianao momba ny haka ny anaram-boninahitra tompon-daka ligy East Anglia niverina tany, fa zava-dehibe kokoa ianao segondra hiala nikapoka ny tsara indrindra foana milalao namana tahaka ny Barcelona - ary foana mandresy. Fa tsy tamin'ity indray mitoraka ity. Tsy tamin'ity indray mitoraka ity, Messi. Vita tanteraka ny amin'iny, izany … Hey, Nahoana no tsy Chip ny mpiandry tsatokazo? Izy no nanala ny tsipika, dia ny foundering, no ahafantaranao ny bokotra - inona no fomba tsara kokoa ny manipika ny midadasika ny nananontanona fahombiazana? Ho vonona miresaka momba izany nandritra ny taona maro. Mandroso ny fahaiza-manao sy ny bokotra Tahafo tsimoka.
Ny baolina fivarotana ny hazo fijaliana fisotroana. Ilay sifflet namely. Taorian'ny fotoana fanampiny, Norwich very ny sazy. Fa ny sisa amin'ny herinandro, isaky ny vadinao mahita anao mihinana, izy manontany: "Ve no tianao poti amin'ny izay?"Mieritreritra angamba ianao fisakaizana izany dia mihazakazaka ny mazava ho azy. Koa, dia mety tsy milalao lalao video indray.
Fiantraikany trano manome Japana Mangatsiaka amin'ny fahavaratra mafana
Oktoberfest fety hoe 'labiera ankehitriny, fifidianana ...
Niaiky i Apple 6S iPhone sy ny 6S Plus Battery Metatra ...
21864	8 Article, Kolontsaina, Toetoetra, Tapaka ny kolontsaina, Games, Keith Stuart, Nintendo, PC, PlayStation, Retro lalao, Anjara Asan'ny milalao lalao, Mitifitra 'en dehibe, Teknolojia, UK Teknolojia, Xbox
← Top 20 iPhone sy ny iPad Apps sy lalao amin'ny volana Logitech Harmony Elite Review →